यो जीवाणु परिवार Enterobacteriaceae पर्छ। र Klebsiella र Escherichia यस "परिवार" प्रकार को अन्य सदस्यहरु बीच, नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ। हुनत यी प्रजाति को सबै तीन अक्सर पाचन पर्चा सामान्य बासिन्दाहरू रूपमा शरीर बाँचिरहेका छौं। अक्सर जीवाणु Proteus बस्नुहुन्छ जहाँ त्यहाँ मानिसहरूको संख्या - Kindergartens र अस्पताल मा।
अस्पतालहरुमा, यो जीवाणु बिरामीको र कर्मचारी दुवै को छाला र श्लेम लाग्एको झिल्ली मा बसोबास। तर, रोग उनको दोष उत्पन्न शायद Proteus सानो बीच अस्पताल-प्राप्त संक्रमण साझा थियो। सामान्यतया मानिसहरू समस्याग्रस्त प्रतिरक्षा (एचआईभी वा अन्य इम्यूनो), र मूत्र को एक असामान्य संरचना वा मूत्र मा कैथिटर सम्मिलित चाहनेहरूलाई भएका विरामीहरु ग्रस्त। यो जीवाणु Proteus र नै प्रकट गर्न सक्ने त थियो।
प्रजाति Proteus mirabilis प्राय रोग हुन्छ। उहाँले तपाईं मूत्र endothelial को पर्खालहरु संलग्न गर्न अनुमति र पाहुना जीव को कक्षहरू विस्मित अपनाउँछन् विशेष hairs छ। अक्सर जीवाणुहरु विरुद्ध अनावश्यक अतिथि परिणामस्वरूप एक पाहुना जीव को कक्षहरू, मा apoptosis को epithelium को मृत्यु सेल exfoliate संग "टाढा निर्लज्ज" ट्रिगर। तर, यो प्रतिकूल प्रक्रिया। साथै, जीवाणुहरु विरुद्ध इन्जाइम urease खराब, धेरै पटक मा pyelonephritis जोखिम बढ्छ जो उत्पादन गर्छ। त्यसैले गैर बेचैनी र सम्भावित जटिलताहरू विरुद्ध भयानक।
को जीवाणु यस रगत प्रवेश गर्दा, यो एक endotoxin (एक खण्ड जोड सेल पर्खाल), एक धेरै मजबूत भडकाऊ प्रतिक्रिया provokes जो। केही विरामीहरु, यो हुनत सम्भावना एकदमै कम छ, sepsis हुन सक्छ। यद्यपि, एक systemic भडकाऊ प्रतिक्रिया को सम्भावना सम्भव छ, र मृत्यु यो पनि हाम्रो समय मा 20-50% हुन सक्छ। सामान्यतया, यस्तो राज्य लामो समय को लागि अस्पताल मा हो र निरन्तर जसको मूत्र स्थिर आघात उजागर छ कि कैथिटर, परिवर्तन गर्न आवश्यक जो जो विरामीहरु मा आउँदैन।
यो जीवाणु Proteus alkaline मूत्र, जसबाट अनुकूल अवस्था रोगजनक नै सिर्जना गर्ने, अमोनिया यसलाई विस्तार। तर, यो केवल आधा समस्या छ। struvite - दोस्रो यसलाई असामान्य पत्थर को गठन गराउँछ छ। तर यो जसले छ मान्छे को लागि एक धेरै गम्भीर जटिलता छ, र त यो स्थायी रूपमा एक कैथिटर परिचय आवश्यक थियो। यी पत्थर फस्फेट बनेको र एक एसिड मध्यम मा भंग छन्। तर Proteus alkaline वातावरण समर्थन गर्दछ।
मुख्य रूप महिलाहरु संक्रमित, स्थायी कैथिटर राखिएका छन् गर्नेहरूलाई बीच रोग को सम्भावना 10-15%, यो को प्रसार छ nosocomial संक्रमण सूचीमा - दोस्रो (निमोनिया पछि)।
व्यवहार कसरी गर्न सक्नुहुन्छ Proteus? Proteus छ जो Proteus vulgaris साँचो mirabilis cephalosporins संवेदनशील। यस मामला मा उपचार को प्रयोग आवश्यक अन्य एन्टिबायोटिक, यस्तो sulbactam र meropenem रूपमा। Proteus vulgaris मूत्र रोग को एक कम साधारण कारण छ।
रोगी alkaline मूत्र, दुखाइ को उजुरी संग संयुक्त भने, यो तुरुन्त डाक्टर infestation Proteus को विचार सुझाव। यस मामला मा, दुई-हप्ता पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, सबै विरामीहरु राम्रो अन्तिम सहनु quinolones र gentamicin, निर्धारित छ, तर यो धेरै प्रभावकारी छ। यो मात्र होइन विरुद्ध, तर पनि अन्य सम्भव रोगजनकों नष्ट किनभने।
अस्पताल हेरविचार मा उपचार निम्न सकेसम्म सानो एक कैथिटर परिचय आवश्यक थियो लग्नु गर्नुपर्छ। रोगी गर्न तरल पदार्थ प्रशस्त प्राप्त गर्नुपर्छ अधिक चाँडै संक्रमण बाट शरीर को मुक्ति को एक प्रक्रिया थियो। बिल्कुल सबै को Proteus डर उसलाई संघर्ष संग अस्पताल बाहेक, छैन असर समस्या सबै प्रतिरक्षा, आवश्यक छैन, त्यसैले जीवाणु Proteus - एक मायालु चिकित्सक, छैन रोगी नातेदार।
कुकुर मा Otitis: कारण, लक्षण, उपचार
रोग सुनुवाइ र दृष्टि: प्रकार, कारण, उपचार, रोकथाम
वयस्क मा कब्जियत लागि अभ्यास। चिकित्सकीय अभ्यास
FTTx - यो के हो? FTTx प्रविधि
पुरातन HELLAS। "युरोपेली सभ्यता को शुरुवात" के हो?
हार्डवेयर अनुहार र शरीर मालिश
Pies र चिप्स लागि भर्नु। व्यञ्जनहरु Pies फोटो
मूल तालिका सजावट - पाम फल
विद्युत - यो छ ... परिभाषा